Shir ku saabsan Shidaalka & Gaaska Sooomaaliya oo dhacaya dalka Britain – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
A warsame 20 October 2014 20 October 2014
Mareeg.com: Shir labgaad oo loga hadlayo Shidaalka iyo Gaaska Soomaaliya ayaa manta ka dhacaya dalka Britain. Shirkaas waxaa soo qabanqaabisay dowladda Soomaaliya oo dooneysa iney dunida u bandhigto kheyraadka dalku leeyahay, si loo soo saaro, loogana faa’iideysto.
Shirkan oo ah kii labaad, waxaa ka qeybgelaya madax badan caalamka iyo Soomaaliya ka socda, waxaana la filayaa inuu furo madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud.
Shirka ayaa la filayaa inuu isla maanta soo gebageboobo, iyadoo lagu qiimeynayo inta ay la ekaan karaan shidaalka iyo Gaaska Soomaaliya.